Jamhuuriga oo Trump uga digay baaritaanka Ruushka - BBC News Somali
Jamhuuriga oo Trump uga digay baaritaanka Ruushka
19 Maarso 2018
Xubno ay xisbiga Jamhuuriga iskala tirsan yihiin madaxweynaha Maraykanka ayaa uga digay in uu farogaliyo Robert Mueller oo ah dacwad ooge khaas ah oo baaritaan ku haya Trump.
Arrintan ayaa timid ka dib markii uu weeraray baaritaanka Mueller ee ku saabsan in Ruushku uu farogaliyay doorashadii Maraykanka ee sannadkii 2016kii.
Qoraal uu dhawaan Twitterkiisa ku qoray Trump ayuu carrabka ku adkeeyay in aysan jirin wax wada shaqayn ah oo dhex martay Ruushka iyo kooxdiisii ol'olaha doorashada, baaritaankana wuxuu ugu yeeray "Quraafaad"
Wuxuu intaas ku daray in baaritaankan ay ka qaalib noqdeen "dimuqraadiyiintu".
Mueller oo ixtiraam badan loo hayo ayaa horay u soo noqday madaxa FBI-da wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga Jamhuuriga.
Lindsey Graham oo ka tirsan Senetka Maraykanka ayaa sheegay in ay tahay in Muller loo ogolaado in uu hawshiisa sii wado isagoo aan farogalin lagu samaynin, xubno kale oo badan oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ayaana aragtidaas la qaba.
"Haddii uu isku dayo in uu sidaa yeelo, taasi waxay noqon doontaa billawga soo afjarmidda madaxweynenimadiisa, sababtoo ah waxaan nahay dal uu sharci ka jiro" ayuu yiri Graham.
Baaritaanka Trump lagu hayo oo marxalad cusub galaya
Jeff Flake oo ah seneter xisbiga Jamhuuriga ka tirsan aadna u naqdiya Trump ayaa sheegay in hadalkii u dambeeyay ee madaxweynuhu uu u muuqdo in uu diyaarinayo eryitaanka Mueller.
AshLee Strong oo ah afhayeenka Paul Ryan oo ah afhayeenka aqalka wakiillada Maraykanka ayaa tiri "sida uu markaste afhayeenku sheego waa in Muller iyo kooxdiisa loo ogolaadaa in ay shaqadooda qabsadaan.